हातमा भाग्य हुने भए यीनी कहाँ हुन्थिन् ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
हातमा भाग्य हुने भए यीनी कहाँ हुन्थिन् ?
एजेन्सी, १२ वैशाख । हामी सबै आफ्नो हत्केलामा भाग्य हेर्दै बसेका छौ, तर के हात नहुनेको चाहि कुनै भाग्य हुँदैन र ? हातको रेखा र भाग्यमा विश्वास गर्ने सबैले दुवै हात गुमाएकी थाइल्याण्डकी यी २३ वर्षे पैचारामन सावानाको जीवनबाट केही सिकौं ।
थाइल्याण्डकी पैचारामन सावानाको दुवै हात नभएकै कारण २३ वर्षको उमेरमा विद्यालयको पढाई सुरु गरेकी थिईन् । यति भएर के भो त ? २३ वर्षको उमेरमा पढाई सुरु गरे पनि उनले मास्टर डिग्री हासिल गरेकी छन् र शिक्षण पेशामा आबद्ध छिन् । उनी वकालतका लागि प्रयास पनि गरिरहेकी छन् । उनले तमाम कठिनाइहरु पार गरेर यो उपलव्धी हासिल गरेकी हुन् ।
दुवै हात नभएका कारण सानामा उनलाई कुनै विद्यालयले भर्ना नै लिन मानेन । त्यसैले उनले त्यतिबेला अध्ययन सुरु गरिन् जब विकलांगहरुका लागि सामान्य विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अनुमति प्राप्त भयो ।
कुनै समय पढ्नका लागि भर्ना समेत हुन नपाएकी सावाना अहिले स्वयम शिक्षिका हुन् । उनी हात नभएर के भो खुट्टाले नै ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर पढाउँछिन् । उनले शिक्षण अनुभूति स्मरण गर्दै भनिन्–मलाई शिक्षणको पहिलो दिन याद छ । मैले खुट्टाले ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको देखेर बालबालिका आश्चर्यमा थिए।
तर, उनी त्यत्तिकैमा रोकिइनन् । उनले कानुनमा मास्टर डिग्री हासिल गरिन् । त्यसैले अहिले उनी भन्छिन्–म थाइल्याण्ड बारमा वकिलको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिइरहेकी छु । म वकिल बनेर र अरुलाई पढाएर गुजारा चलाउन चाहन्छु ।
पढाईले सावानाको दायरा बढाएको छ। उनी भन्छिन्–म चाहँदिन कि कसैले यो भनोस कि म विकलांगताका कारणबाट के गर्न सक्थेँ के गर्न सक्दिनँ । म त्यो सबै नियम तोड्न चाहन्छु जुन विकलांग पीडितहरुका विषयमा समाजले बनाएको छ।’